Blu-Ray BD DVD CD ဗွီဒီယိုပလေယာဆော့ (ဖ်) ဝဲကိုအခမဲ့ရယူပါ | | OS ကို-STORE ဘလော့ခ်
နိုဝင်ဘာလ 19, 2017 admin ရဲ့ လြှောကျလှာ, ကွန်ပျူတာ, မောင်းသူ, OSGEAR ပံ့ပိုးမှု, ထုတ်ကုန်များ, သိုလှောင်ခြင်း 0
Blu-ray disc (အတိုကောက် bd) အရည်အသွေးမြင့်ဗီဒီယိုနှင့်မြင့်မားသောစွမ်းရည် data တွေကိုသိမ်းထားဖို့ DVD ကိုအပြီး disc ကိုကို formats ၏နောက်မျိုးဆက်တစ်ခုဖြစ်တယ်. Blu-ray disc Blu-ray Disc Association ကစီစဉ်ထားတဲ့မျိုးဆက်သစ် disc ကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြချက်ဖြစ်ပါသည်, Sony နဲ့ Matsushita လျှပ်စစ်စက်မှုကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ရေးစပ်သော, Ltd. ,, နှင့် SONY အတွက်ဆက်စပ်ထုတ်ကုန်များပြည့်စုံမြှင့်တင်ရေးဦးဆောင် 2006. Blu-ray disc တစ်ခုလှိုင်းအလျားမှာတစ်ဦးအပြာလေဆာရောင်ခြည်ကို အသုံးပြု. စာဖတ်ခြင်းနှင့်စာရေးခြင်းအဘို့အမည်ရှိနေကြတယ် 405 nanometers (တစ်ဦး 650 DVDs နဲ့တစ်ဦးအဘို့အ nanometer လှိုင်းအလျားအနီစာဖတ်သူကို 780 CD များအဘို့ nanometer လှိုင်းအလျားအနီအောက်ရောင်ခြည်). ဤတွင်လူတိုင်းအတွက်မျှဝေဖို့အဘို့အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ပရော်ဖက်ရှင်နယ် Blu-ray player ပြန်ဖွင့်မီးလောင်ရာဆော့ဖ်ဝဲအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်.
Mac OS အတွက်အကြံပြု
USB3.0 bd Reader ကို
ပူပြင်းတဲ့ကမ်းလှမ်းချက် ~ ~ ~
USB2.0 bd Reader ကို
မူလ software ကိုသုံးပါနှင့်ကူညီပံ့ပိုးပေးပါ
LEAWO Blu-ray player Player ကို
Leawo အဖြစ်အခမဲ့ Blu-ray disc player ကိုပြုမူ, အခမဲ့ DVD ကို disc ကိုကစားသမား, အခမဲ့ 4K HD ဗီဒီယို, အခမဲ့ ISO ဖိုင်ကိုကစားသမား, နှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည်အသံဖိုင်ကစားသမား. အခမဲ့ Blu-ray disc player ကို software ကို app ကိုဖြစ်ခြင်း, ဒါဟာလုံးဝအခမဲ့ Blu-ray disc ကစား, DVD ကို discs တွေကိုပြန်ဖွင့်နဲ့အောက်ဖက်သဟဇာတ, သူတို့စီးပွားဖြစ်သို့မဟုတ်ပုံမှန်များမှာနေပါစေ. ဒါဟာ Windows ပေါ်မှာ Blu-ray player ကစားဖို့အကောင်းဆုံးအခမဲ့ဆော့ဖ်ဝဲကိုဖွင့် (Windows Vista ကအပါအဝင်, XP ကို, 7, 7, 8, 8.1, နှင့် 10).
PowerDVD ထူးခြားတဲ့ရုပ်ရှင်နှင့်အတူထုပ်ပိုး, တစ်ခုမယှဉ်နိုင်တဲ့စွဲငြိဖွယ်ရာမျက်မှောက်အတွက်မရှိမဖြစ်ဂီတနှင့်ဓာတ်ပုံ features တွေ & အသံကအတွေ့အကြုံကို. ထိုသူတို့၏ကိုယ်ပိုင်နေအိမ်များအတွက်ရုပ်ရှင်ရုံခံစားဖန်တီးရန်ရှာနေလူများအတွက်, PowerDVD ယခုသင့် 4K နှင့် HDR တီဗီများ၏အလားအလာတိုးမြှင့်ဖို့မရှိမဖြစ်ကမ္ဘာ့ပထမဦးဆုံးနည်းပညာရှိပါတယ်!
Macgo Blu-ray player ကို
စံ Versiom - The best Blu-ray Player software that supports BD, ထူးခြားသော hardware acceleration ကိုအတူက ISO ဖိုင်တွေနဲ့ BDMV ဖိုလ်ဒါ - BluFast MX.
Pro ကိုဗားရှင်း - မျိုးစုံမီဒီယာကို formats နှင့်အတူလိုက်ဖက်တဲ့မူရင်းအသံအရည်အသွေးကို Enhance Full-featured Blu-ray player menu ကို support
Corel WinDVD Pro ကို
ဦးဆောင်ဗီဒီယိုကိုပြန်ဖွင့်နှင့်အတူဟောလိဝုဒ်အိမ်ပြန်ယူခဲ့, Blu-ray player နဲ့ DVD ကိုဆော့ဖျဝဲ, Corel®WinDVD® Pro ကို. high-resolution 4K ဗီဒီယိုများနှင့် HEVC ထံမှ (H.265 *), 3D ဗီဒီယို, DVDs နဲ့ Blu-ray player, ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်အရည်အသွေးမြင့်နှင့်အတူကို formats တစ်ခုကြီးမားသောအကွာအဝေးကိုခံစား, Dolby အသံနဲ့ပိုပြီး. တစ်ဦး updated အတွက်အလိုလိုထိန်းချုပ်မှု, ခေတ်သစ် interface ကိုသင်အလွယ်တကူဒဏ်ငွေ-ညှိဗွီဒီယိုနဲ့အသံကုန်အံ့. Plus အား, အသစ်ကအတူချောမွေ့ပြန်ဖွင့်ကိုခံစား 240 fps စွမ်းဆောင်ရည်ကို.
AnyMP4 Blu-ray player ကို
မည်သည့် Blu-ray disc / Folder ကို / က ISO image file ကို Play, 4မြင့်မားသောအဓိပ်ပါယျပုံရိပ်နှင့်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဗွီဒီယိုအရည်အသွေးနှင့်အတူငွေကျပ်ဗီဒီယိုနှင့် 1080p HD ဗီဒီယို.
Blu-ray player Toolkit ကိုတစ်ခုဖြစ်သည် All-In-One Blu-ray player software ကို, အရာ Blu-ray player Player ကိုပါဝင်သည်, Blu-ray player Ripper, နှင့် Blu-ray player Copy ကူးပလက်တီနမ်ဆော့ဖျဝဲ. ဒီအစွမ်းထက်နှင့်စွယ်စုံ Blu-ray player Toolkit ကိုနှင့်အတူ, အသုံးပြုသူများသည်အလွယ်တကူမဆို Blu-ray player ပြဿနာကိုကိုင်တွယ်ကာထူးခြားသော Blu-ray player အတွေ့အကြုံကိုခံစားနိုငျ.
Aiseesoft Blu-ray player Player ကို
Blu-ray disc play နိုငျကွောငျးတစ်ဦးကအစွမ်းထက်ကစားသမား, Blu-ray player folder ကို, DVD ကို disc ကို / folder ကို / က ISO ဖိုင်ကိုနှင့်ဘုံမီဒီယာဖိုင်တွေနဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုချောချောမွေ့မွေ့. သငျသညျ 1080p HD ကိုအမြင်အာရုံအကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်တိုက်ရိုက်မဆို Blu-ray disc ကစားရန်တတ်နိုင်ကြသည်နှင့် H.265 / HEVC ကို PC ပေါ်မှာ losslessly 4K ဗီဒီယိုဖိုင်များကုဒ်သွင်းဆော့ကစား. ပိုပြီးင်ကဘာလဲ, ဒီ Aiseesoft Blu-ray player Player ကိုလည်းမဆို, HD / SD ကဗီဒီယိုဖိုင်များတစ်ဘုံမီဒီယာပလေယာအဖြစ်ပြုမူနှငျ့သငျစွဲငြိဖွယ်ရာအသံအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုခံစားနိုင်ကြသည်.
~ ကိုပို Blu-ray ပံ့ပိုးမှုနှင့်ထုတ်ကုန် Get ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ
3D Blu Ray bd ဗီဒီယို play လုပ်နည်း??
64-နည်းနည်းက Windows စီပီယူ Intel က ဥပဒေရေးရာအနက် HTC က HD Graphics နည်းပညာ စီးရီးယာဉ်မောင်းပံ့ပိုးမှု device ကိုမော်ဒယ် ကားမောင်းသူထောက်ခံမှု Nokia က ပြည်သူ့ရည်ရွယ်ချက် processor ​​ကို Software များ စက်ပစ္စည်းကိရိယာမန်နေဂျာ မိုဘိုင်းဖုန်း ပရိုဆက်ဆာ OS ကို-STORE Technology_Internet Samsung က
မိုဘိုင်းဖုန်း processor ​​ကို နည်းပညာ Technology_Internet ပြည်သူ့ရည်ရွယ်ချက် Nokia က Samsung ရဲ့ Galaxy စီးရီးယာဉ်မောင်းပံ့ပိုးမှု ဥပဒေရေးရာအနက် ကားမောင်းသူထောက်ခံမှု HD Graphics Sony Ericsson က စမတ်ဖုန်းများ Samsung က device ကိုမော်ဒယ် Intel က HTC က စက်ပစ္စည်းကိရိယာမန်နေဂျာ စီပီယူ Qualcomm မှ 64-နည်းနည်းက Windows Intel က Server ကို ပရိုဆက်ဆာ OS ကို-STORE Software များ